RW CabdiWeli oo ka warbixiyey socdaalkii Adds Ababa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RW CabdiWeli oo ka warbixiyey socdaalkii Adds Ababa
Muqdisho – Mareeg.com: Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Cabdi wali Sheekh Axmed oo dalka Ethiopia kaga soo qeyb galay shirka Urur Goboleedka IGAD ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, isagoona Garoonka diyaaradaha ay ku soo dhaweeyeen Labada Gole ee Dowlada iyo xubno ka mid ah Bulshada rayidka.
C/wali Sheekh Axmed Maxamed ayaa markii uu ka soo degay garoonka Aadan Cadde ka dib saxaafada uga warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay shirkii uu kaga soo qeyb galay Adis-ababa,wuxuu sheegay in Shirka muhiimadiisa ahayd xaalada dalka Koonfurta Suudaan iyo sidii loo sii wadi lahaa xasilinta xiisadaha ka taagan dalkaasi ee u dhaxeeya Mucaaradka iyo Dowlada.
Sidoo kale, ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in Ethiopia si gaar ah ugu wada kulmeen dhigiisa Ethiopia Hailamariam Deselegn, isagoona sheegay inay ka wadi hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
Waxay labada Ra’iisul Wasaare ka wada hadleen dadaallada Soomaaliya ugu jirto xasilinta dalka, iskaashiga labada dal, qalabeeynta ciidamada Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalka ay labada dal kula jiraan kooxaha nabad-diidka ah.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa Hailemariam Dessalegn uga mahad celiyay taageerada uu dalka Itoobiya mar walba la garab taagan yahay dalka Soomaaliya. Wuxuu sidoo kale ammaanay kaalinta xooggan ee ay ciidamada Itoobiya kaga jiraan AMISOM.
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheikh Axmed wuxuu dhiggiisa Itoobiya kala hadlay sidii uu dalka Itoobiya u kordhin lahaa taageerada uu ka siiyo Soomaaliya dhanka ciidamada. Wuxuu Mudane Hailemariam Dessalegn ballan qaaday inuu dalkiisu gacan ka geysan doono sidii Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya loo tayeeyn lahaa oo uu hub iyo rasaas u iibsan lahaa.
Wuxuu yiri Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheikh Axmed:
“Waxaa dalka Itoobiya nagala dhexeeya iskaashi iyo xiriir qoto dheer. Waxaan uga mahad celinaynaa dalka Itoobiya sida wanaagsan oo uu mar walba noogu garab taagan yahay dadaalka aan ugu jirno xasilinta iyo nabadeeynta Soomaliya. Waxaan sidoo kale uga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo ay uga qeyb qaateen ciidamada AMISOM oo ay ku dareen ciidan badan. Waxaa lagama maarmaan ah in mar walba uu hadafkeenu ahaado inaan sii xoojinno xiriirka labada dal maadaama aan nahay labo dal oo walaalo ah oo aan kala maarmin.”
Dhiniciisa, Hailemariam Dessalegn wuxuu yiri:
“Itoobiya iyo Soomaaliya waa isku dan. Itoobiya waxaa danteedu ku jirtaa inay Soomaaliya xasiloon tahay, waxaana dalkeenna ka go’an inaan dadaal walba ku bixinno sidii Soomaaliya aan uga taageeri lahayn inay gaarto guulaha ay higsaneeyso. Waxaan ciidanka Soomaaliya ka taageeri doonnaa inay helaan hubka ay u baahan yihiin si ay ula dagaalaan cadowga labadeenna dalba halista ku ah.”
Waxay labada ra’iisul wasaare sheegeen inay ka go’an tahay inay sii wadaan dadaalka wadajirka ah ee ay ugu jiraan inay Soomaaliya iyo Itoobiyaba ka dabar gooyaan kooxaha nabad-diidka ah kuna dadaalaan sidii xasilloonida gobolka oo dhan loo xaqiijin lahaa.
Nicholas Kay oo ka walaacsan luminta guulihii Soomaaliya
Qarax ka dhacay Suuqa Bakaaraha